Tag Archives: I-Era Yokuthula
Umphefumulo WaseCalifornia - Enhliziyweni Yesonto
… Ukunqoba sekuqalile.
UFatima kanye ne-Apocalypse
Yeka ukuthi uFatima nencwadi yeSambulo ziwumyalezo ofanayo.
Umphikukristu… Ngaphambi Kwenkathi Yokuthula?
Ngumbhedo noma Isiko?
IMedjugorje - Isikhathi Sokubeletha
Vumela ubungcwele busibuse empilweni yakho.
I-Valeria - Ngifuna Ujabule
Momotheka, ngenxa yensindiso yakho.
Umphefumulo WaseCalifornia - Yiba Nokuqiniseka!
Enhliziyweni Yami Engaphelele, uzothola injabulo.